အီဟွာသူရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: April 2010
Posted by ewhainnshwe at 11:19 AM No comments:
Posted by ewhainnshwe at 11:12 AM No comments:
Posted by ewhainnshwe at 10:57 AM No comments:
ကျောင်းတက်နေကြရပြီဆိုတော့ သူသူကိုယ်ကိုယ် Stress တွေသိပ်များကြတာပဲနော်။ စာကြိုးစားတာကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကိုတော့ အထူးဂရုစိုက်ကြဖို့လိုပါတယ်။ မိဘတွေက အဝေးမှာလေ။ Stress သိပ်များတဲ့အခါ စိတ်ကိုဖြေလျှော့ဖို့ ဟာသလေးတွေဖတ်ပေးဖို့လည်းလိုတယ်။ အိန္ဒိယက ဟာသလေးတွေဆိုတော့ မြန်မာနဲ့အတွေးက တော်တော်နီးစပ်တယ်။ အချိန်ရတဲ့အခါ ဘာသာပြန်ပြီး တင်ဖို့လည်းစဉ်းစားထားပါတယ်။ ခုတော့ ဘိုလိုလေးဘဲဖတ်လိုက်ကြတာပေါ့
Sir:* What is the difference between Orange and Apple?*
Sardar:* Color of Orange is orange, but color of Apple is not Apple.
SADARJI boughtanew mobile.
He sentamessage to everyone from his Phone Book & said, 'My Mobile No. Has changed. Earlier it was Nokia 3310. Now it is 6610'
SADARJI : I am Proud, coz my son is in Medical College .
SADARJI : No, he is not studying, they are Studying him.
SADARJI : Doctor, in my dreams, I play football every night.
SADARJI : Can I take it tomorrow, tonight is final game.
SADARI : If I die, will you remarry?
SADARJI : No, I'll also stay with your sister.
SADARJI complained to the police:
SADARJI : 'I was watching TV news...'
SADARJI comes back to his car & findanote saying 'Parking Fine'
How do you recognize SADARJI in School?
SADARJI inabar and his cellular phone rings. He picks it up and Says 'Hello, how did you know I was here?'
SADARJI : Why are all these people running?
SADARJI - If only the winner will get the cup, why others are running?
SADARJI : The future tense is 'you will go to jail'
SADARJI told his servant: 'Go and water the plants!'
SADARJI : 'So what? Take an umbrella and go.'
Sardar:* My mobile bill how much?*
Call center girl:* Sir, just dial 123 from your mobile to know current bill status*
Sardar:* Stupid, not CURRENT BILL my MOBILE BILL. *
Sardar: *I think that girl is deaf..*
Friend:* How do you know?*
Sardar: *I told I Love her, but she said her Sandals are new *
Friend:* I gotabrand new Ford IKON for my wife!*
Sardar:* Wow!!! That's an unbelievable exchange offer!!! *
Teacher:* Which is the oldest animal in world?*
Sardar:* Bcoz it is Black & White *
Judge:* Don't U have shame? It is the 3rd time you are coming to court..*
Sardar to judge:* You are coming daily to court, don't you have shame?
Sardar attending an interview in Software Company.*
Manager:* Do you know MS Office?*
Sardar:* If you give me the address I will go there sir.
Sardar in airplane going to Bombay
While its landing he shouted: "Bombay ...Bombay "*
Air hostess said: *"B silent.."*
Sardar:* "Ok... Ombay. Ombay"
Teacher: "What is common between JESUS, KRISHNA, RAM, GANDHI and BUDHA?"
Sardar: "All are born on government holidays...!!! *
Sardar:* Miss, you called to my mobile?*
Teacher: *Me? No, why?*
Sardar:* Yesterday I saw in my mobile- 1 Miss Call".
(Had never thought of it) *
Posted by ewhainnshwe at 10:34 AM No comments:
သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင် သူ့အားနည်းချက်အပါအဝင် သူ့ရဲ့အရာအားလုံးကို
အချစ်မှာ ယုံကြည်ခြင်းတွေ လိုပါတယ်။ တစ်ဘက်သားကို မယုံကြည်ဘဲ
အမြဲသံသယအမေး၊ သံသယအတွေးတွေနဲ့ အချစ်ကိုမယုံကြည်ခဲ့ရင် နောက်ဆုံးမှာ
တစ်ဘက်သားကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ သူ့အပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အရေးပေးမှုကို
ပြသနေသလိုပါပဲ။ ဖုန်းလေးတစ်ချက်နဲ့ "အလုပ်ပင်ပန်းလား?"ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်တဲ့
အမေးလေးမေးနိုင်သလို "မိုးအေးပြီနော်... အနွေးထည်ထပ်ဖို့
မမေ့နဲ့နော်"ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့လေးလည်း ပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဂရုစိုက်မှုတွေက
တစ်ဘက်သားအတွက် တကယ့်အသုံးမနိုင်ဝင်ပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ သူ့စိတ်ကို
အချစ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ပျော်ရွှင်၊ ကြည်နူးခြင်းတွေကိုလည်း
ကျေကျေနပ်နပ်ခံစားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ချစ်ခရီးလမ်းက ပိုတာရှည်တည်မြဲ
လက်ထပ်ပြီးအတူနေသည့်တိုင် တစ်ဘက်သားကို ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုနဲ့
လျှို့ဝှက်ချက်တချို့ ရှိစေသင့်တယ်။ ကိုယ်နဲ့အိမ်ထောင်ကျတာဟာ
ထောင်ထဲရောက်သွားသလို အချုပ်နှောင်ခံတာမျိုး တစ်ဘက်သားကို
မခံစားစေချင်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုဆိုတာ ရှိသင့်ပါတယ်။
အချစ်ဆိုတဲ့အရာက ကိုယ်ပေးဆပ်တိုင်း ပေးဆပ်သလောက် ပြန်ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် မပေးဆပ်ရင်တော့ လုံးဝပြန်ရဖို့ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ပေးဆပ်သလိုမျိုး
တစ်ဘက်သားက ပြန်ပေးဆပ်ခဲ့ရင် ဒါဟာ စစ်မှန်တဲ့အချစ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးသားနဲ့ရင်းပြီး ချစ်သင့်တယ်၊ ကြင်နာနားလည်သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့
ချစ်ခြင်းမှာ နှလုံးသားတစ်စုံသာ မပါခဲ့ရင် အချစ်စစ်လို့မည်လိမ့်မှာ
စကားပြောကောင်းတဲ့ချစ်သူက "ငါဟာ မင်းအတွက်မွေးဖွားလာတာပါ"
လို့ပြောတတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ရှင်သန်မှုတွေရှိကြတယ်။
တစ်ဘက်သားကို အလွန်အကျွံ မှီခို၊ အားကိုးတာက သူ့ကိုတာဝန်ပိုစေတဲ့အပြင်
သင့်တင့်တဲ့ မနာလို၊ သဝန်တိုမှုတွေက သူဟာ ကိုယ့်အတွက်
ဘယ်လောက်အရေးပါကြောင်း တစ်ဘက်သားကို ခံစားစေတယ်။ သဝန်တိုဖို့
အကျိုးအကြောင်းညီမျှရမယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ အကျိုးအကြောင်း
အဆက်အစပ်မရှိတဲ့ သဝန်တိုမှုတွေက တစ်ဘက်သားကို မလိုလားမှုတွေ
အနမ်းတစ်ပွင့်က စကားအခွန်းထောင်သောင်းထက် သာလွန်ပါသတဲ့။
ညင်သာတဲ့အနမ်းတစ်ပွင့်နဲ့ ကိုယ့်မြတ်နိူးမှု၊ ကြင်နာမှုကို ပြသနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူကိုနမ်းဖို့ မတွန့်တိုသင့်ပါဘူး။
ချစ်တာနဲ့ နှစ်သက်တာမတူပါဘူး။ ချစ်မိပြီဆိုရင် တစ်ဘက်သားအတွက်
အကြောင်းက ငယ်ရွယ်စဉ် ရည်းစားထားချိန်မှာ ကလေးဆန်စိတ်တွေ
များနေခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူကမှ အဆင်ခြေမရှိ စူစူအောင့်အောင့်
မကြီးပြင်းတတ်တဲ့ကလေးကို အမြဲအလိုလိုက် ချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် လူရင့်ကျက်ရင် အချစ်လည်းရင့်ကျက်ပြီး လှပတဲ့အဖူးအပွင့်တွေ
ချစ်စကြင်စမှာ လူတွေက ကိုယ့်အားနည်းချက်၊ အနာအဆာကို သိုဝှက်ပြီး
ပေါ်လာတတ်တယ်။ ချစ်စတည်းက ပကတိအတိုင်းချစ်မယ်၊ သဘာဝအတိုင်း
ဟန်ဆောင်မှုတွေကင်းခဲ့ရင် အချစ်က ပိုတာရှည်တည်မြဲမှာဖြစ်တယ်။
တစ်ဘက်သားရဲ့ ဝါသနာ၊ ကြိုက်နှစ်သက်တာတွေကို ဂရုတစိုက်မှတ်သားခြင်းဖြင့်
တစ်ဘက်သားကို ပိုနားလည်စေသလို တစ်ခါတလေမှာ သူ့ကို ထူးဆန်းအံ့သြအောင်
လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- မဂ္ဂဇင်းအတူကြည့်တုန်း စာအုပ်ထဲကနာရီကို
သူသဘောကျကြောင်းပြောခဲ့ရင် သူ့မွေးနေ့မှာ သူအံ့သြဝမ်းသာအောင်
လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို တစ်ဘက်သားရဲ့အကြိုက်ကို
ဂရုစိုက်တတ်တဲ့စိတ်က လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေထက် ပိုတန်ဖိုးရှိကြောင်း
ယောက်ျားလေးချစ်သူက မိန်းကလေးချစ်သူကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ
သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးချစ်သူကလည်း ယောက်ျားလေးချစ်သူရဲ့ လေးစားမှု၊
မျက်နှာသာပေးမှုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရပါမယ်။ လူတွေကြားမှာ
သူ့အရှက်မရဖို့၊ ထိခိုက်နာကျင်မှုတွေ မရဖို့ သတိထားရပါမယ်။
ခွင့်လွတ်သည်းခံခြင်းတွေ အချစ်မှာမရှိမဖြစ်တဲ့ အရာတွေဖြစ်တယ်။
တစ်ဘက်သားရဲ့အမှားကို ပြည့်ဝတဲ့သဘောထားတဲ့ ခွင့်လွတ်သင့်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ကိုယ့်အတွက် ချစ်သူပေးဆပ်တဲ့အရာတိုင်းကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊
စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားတဲ့ ပုံစံမျိုး ထုတ်မပြသင့်ပါဘူး။
အဲဒီအပြုအမှုတွေက သူ့ကို စိတ်ဓာတ်ကျအားငယ်စေပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်
ချစ်သူပေးဆပ်တာကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်တဲ့အသွင်နဲ့ လက်ခံပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ
နှစ်ဦးသားရဲ့ အကြင်နာကို ပိုမိုခိုင်မြဲစေပါတယ်။
တကယ်ချစ်ကြပြီဆိုရင် ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်၊ ဝမ်းနည်းခြင်းတွေကို
အတူတကွမျှဝေသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘဝဖော်တစ်ဦးရဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး
တစ်ဘက်သားရဲ့ အမူအကျင့်ကို နားမလည်နိုင်ခဲ့ရင် အချစ်ဟာ အထီးကျန်ပြီး
ဆက်ဆံရေးမဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဘက်သားရဲ့ ရှုထောင့်ကနေပြီး
တွေးတောခံစားပေးခြင်းအားဖြင့် တစ်ဘက်သားကို ပိုနားလည်စေနိုင်ပါတယ်။
အချစ်မှာ ဖြောင့်မှန်၊ မှန်ကန်ခြင်းတွေ အဆတစ်ရာလိုပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်း
ကိုယ့်ချစ်သူကို "အပြောသမား" တစ်ယောက် မဖြစ်စေချင်သလို သူကလည်း
ကိုယ့်ကိုဖြစ်စေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချင်းချင်း အချစ်ညာစားသူ
အချစ်မှာ စောင့်တာက အခြေခံလိုအပ်ချက်လေးဖြစ်တယ်။ တစ်ဘက်သားနဲ့
အတူကြီးပြင်းရှင်သန်သင့်ပါတယ်။ ခရီးလမ်းဆုံးထိ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး
ဖေးမစောင့်စားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်အရင် ခြေလှမ်းလှမ်းပြီး တစ်ဘက်သားကို
ချစ်သူအပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ့်အချစ်ကို နေ့တိုင်းဆတိုးပြီး မြှောက်သွားခဲ့ရင်
နှစ်ယောက်အတူနေချိန်မှာ ငြင်းခုန်မှုက ရှိစမြဲဖြစ်တယ်။
နောက်ခြေတစ်လှမ်းဆုတ် အလျော့ပေးတာက ဒေါသမုန်တိုင်းကို ငြိမ်းအေးစေပါတယ်။
နောက်ပြီး ပြဿနာကို သဲသဲကွဲကွဲ မသိခင် "လမ်းခွဲကြရအောင်" ဆိုတဲ့စကားကို
အလွယ်တကူမပြောမိဖို့ သတိထားရပါလိမ့်မယ်။ စိတ်တွေငြိမ်သွားမှ
ပြဿနာရင်းမြစ်ကိုရှာပြီး ဖြေရှင်းနည်းတွေ ရှာတာဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
ခံစားချက်မျိုး၊ စိတ်သဘောထားမျိုးထားဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။ တည်မြဲပြီလို့
မှတ်ယူပြီး အချစ်ကို ပစ္စလက္ခမထားဘဲ၊ အနယ်မထိုင်စေဘဲ နေ့တိုင်းအချစ်ကို
အသစ်အသစ်အဖြစ်နဲ့ ချစ်နိုင်၊ ခံစားနိုင်ခဲ့ရင် အချစ်ဟာ
အချစ်တာရှည်ခိုင်မြဲဖို့၊ ချစ်ခရီးလမ်းဖြောင့်ဖြူး သာယာဖို့ အဓိကထား
ဖတ်ဖူးကောင်း ဖတ်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အချစ်က ဘယ်တော့မှ ဘာသာပြန်ဆိုလို့
ပြီးနိုင်မယ့်အရာမဟုတ်တာကြောင့် အဲဒီအချစ်တွေကိုပဲ ကျွန်မက
ထပ်ဘာသာပြန်ဆိုပါတယ်။ အချစ်အက္ခရာ A to Z လက်ခံသည်ကပဲ စမှတ်စခဲ့ပါတယ်။
Posted by ewhainnshwe at 10:33 AM No comments:
Posted by ewhainnshwe at 10:23 AM No comments:
ဒီ ကောင်းကင်စာမျက်နှာကိုလာလည်ကြတဲ့ အဖွဲ့ဝင်အများစုက ပညာသင်ယူနေဆဲကျောင်းသားတွေဖြစ်တာမို့ ဖတ်ထားမှတ်ထားတဲ့ မှတ်စုထဲကနေပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ စာဖတ်တဲ့အခါ Effective reading ဖြစ်အောင် . . .
(၁) ဦးဏှောက်က အရောင်များကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက် စာဖတ်/ရေးစဉ် အရောင်များကို သုံးပါ။ အရောင်ရှိစက္ကူလေးများနဲ့မှတ်ပါ။
(၂) မိနစ် ၂၀ ခန့်စာဖတ်ပြီးတိုင် ၁၀ မိနစ်ခန့်နားပါ။
(၃) အကြောင်းအရာတစ်ခုကိ သင်ကြားတတ်မြောက်ပြီးသွားတိုင်း ဦးဏှောက်ကပင်ပန်းသွားတဲ့အတွက် အနဲဆုံး မိနစ် ၂၀ခန့်နားပါ။
(၅) ရေငတ်နေလျှင် စာကိုအာရုံမစိုက်နိုင်လို့ စာဖတ်နေစဉ် ရေများများသောက်ပေးပါ။
(၆) မေးခွန်းများထုတ်ပြီး လေ့လာပါ။
(၇) ဦးဏှောက် နိုးကြားတက်ကြွနေစဉ် စာကိုလေ့လာပါ။
(၈) စာဖတ်စဉ် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပျော့ခွေမထားပါနဲ့။ ခန္ဓာကိုယ် မတ်ထားမှသာ ဦးဏှောက်က ပိုမှတ်နေပေါတယ်။ လိုအပ်ပါက ခန္ဓာကိုယ်ကို ရှေ့ကို နဲနဲစိုက်ထားပါ။
(၉) စာဖတ်တဲ့ စာကြည့်စားပွဲပတ်ဝန်းကျင်သည် ရနံ့တို့နဲ့မွှေးပြန့်နေပါစေ။
(၁၀) ဦးဏှောက်သည် အောက်စီဂျင်အလွန်လိုအပ်သည့်အတွက် နားနေစဉ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပါ။ အပြင်ထွက်အသက်ရှူ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ လေများများရှူသွင်းပေးပါ။
(၁၁) ဦးဏှောက်သည်လည်း နေရာလွတ်လိုပါသည်။ အရာရာတိုင်း ပြည့်ကျပ်အောင်ထည့်ထားပါက အကျိုးမရှိပါ။
(၁၂) ဦးဏှောက်သည် သန့်ရှင်းသပ်ယပ်မှုကို အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ စိတ်ကြည်နေပါက မှတ်ဥာဏ်ပိုကောင်းပါသည်။
(၁၃) Stress များသည်မှတ်ဥာဏ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါသဖြင့် Stress များကို တတ်နိုင်သမျှလျှော့ချပါ။
(၁၄) ဒါကို ငါမလုပ်နိုင်ဟုမတွေးပါနှင့်။ I can do it. လို့ မိမိကိုယ်မိမိ အားပေးပါ။
(၁၅) ဦးဏှောက်ကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး ကြွက်သားများကို ဖြေလျော့ပေးပါ။
(၁၆) ဦးဏှောက်သည် ထပ်ကာ ထပ်ကာ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို သဘောကျသည့်အတွက် အရာရာကို ထပ်ကာ ထပ်ကာပြန်ဖတ် ပေးပါ။
(၁၇) ဦးဏှောက်သည် ရွေ့လျားနေတာကို ပိုကြိုက်သည့်အတွက် လက်ချောင်း (သို့) ခံတံတစ်ခုခုကိုသုံးပြီး စာကြောင်းများပေါ် ရွေ့လျားကာ မျက်လုံးကို ဦးဆောင်ပြီးဖတ်ပါက ဦးဏှောက်မှတ်ဥာဏ်ပိုကောင်းလာပါလိမ့်မည်။
(၁၈) တနေရာတည်းတွင် ထိုင်ပြီးဖတ်နေခြင်းထက် မတ်တတ်ရပ်ဖတ်ပါ။ လမ်းလျှောက်ဖတ်ပါ။
(၁၉) ဦးဏှောက်သည် ကွင်းဆက်များဖြင့်မှတ်သားခြင်းကို ပိုနှစ်သက်ပါသည်။
ဥပမာ- မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းအလေးချိန် (မမင်းဖြူမှန်မှန်ပြော)
(မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါးတစ်ခုမှ မှတ်စုယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မဂ္ဂဇင်းအမည်၊ ထုတ်ဝေသည့်လ၊ စာရေးသူနှင်း ဆောင်းပါးအမည်များ ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်တောင်းပန်ပါသည်)
Posted by ewhainnshwe at 10:20 AM No comments:
စာရေးသူမှာ အစ်ကိုဝမ်းကွဲ လေးယောက်ရှိပါတယ်။ အစ်ကို အကြီးဆုံးက အရင်ဆုံးအိမ်ထောင်ကျပြီး သမီးလေးတစ်ယောက် မွေးထားပါတယ်။ အဲဒီတူမလေး ၄နှစ်အရွယ်မှာ အစ်ကိုနောက်တစ်ယောက်က မင်္ဂလာဆောင်ပါတယ်။ အဲဒီမင်္ဂလာဆောင်မှာ ဂါဝန်လှလှလေးဝတ်ပြီး သူသွားရတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ သူ့ဦးလေးသုံးယောက်လုံး မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရော ဘာပြောတယ်ထင်ပါ သလဲ။ ဦးနီ မင်္ဂလာဆောင်တာလဲ မီးမီးမှတ်မိတယ်၊ ဦးမှန်မင်္ဂလာဆောင်တာလည်း မီးမီးမှတ်မိတယ်၊ ဦးတုတ်မင်္ဂလာဆောင် တာလဲမှတ်မိတယ် ဒါပေမယ့် ဖေဖေမင်္ဂလာဆောင်တာ မမှတ်မိဘူးတဲ့ . . .